"Tranombongo kely, mahafantatse ty hasarotry ny fiaina e!" - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny kere aty atsimo ihany
"Tranombongo kely, mahafantatse ty hasarotry ny fiaina e!"
Akon’ny lahatsoratra iray niseho teto amin’ny www.lakroa.mg izy ity. Ako avy amin’i Monsenera Vincent RAKOTOZAFY, evekan’i Taolagnaro.
Raha namaky ny lahatsoratra nosoratan’ i Emma, nivoaka teto amin’ny Lakroa ny 19 fevrie : “TSY MITAZAM-POTSINY NY FIANGONANA” ity olona anankiray dia nanoratra taty amiko : Nahoana tsy “ action “ itambarana no ataon’ny Fiangonana, hafahafa ny fijerin’ ny manodidina azy, nefa samy ato amin’ny Diosezy. Nisy indray nanontany hoe : ary ireny zavatra nalefanay ireny ary mba nankaiza, raha izao no fandehany ?....
Izao no valy nomeko. Mazava ny voalaza hoe : “Manohana be ny rahalahiny amin’izao asa fitiava-namana izao i Mompera Pedro”. Tsy nivantana taty amin’ny Diosezy ireny fa tany amin’ny Fikambanana, ka dia izay no nitantanany azy, satria izay no fanirian’ny mpanome.
Fa ireo vola nivantana taty amin’ny Diosezy dia nividianana vary, voa maina, menaka, ka tamin’ny fivorian’ny pretra: 26 – 28 zanvie no nitsinjarana azy, rehefa avy nifampizara ny zava-misy any amin’ny distrika tsirairay any. Isaorana ny CRS nampindrana camion nitanterana ireo sakafo ireo. Koa isaorana ny Fikambanan-dRelijiozy vehivavy sy lehilahy eran’ny Nosy, ireo diosezy, antokon’olona, na olon-tokana nanolo-tànana.
Ny avy amin’ny Caritas Nasionaly sy diosezy sasantsasany dia fevrie vao tonga, ka araka ny dinika tamin’ny fivorian’ny pretra io ihany, dia anampiana izay tena mbola voa mafy, ary koa ividianana masomboly. Ny zavatra tsy maintsy tandremana dia ny fampiankinan-doha lava, mba hilazana hoe : tena mikarakara ny sahirana.
Isaorana an’Andriamanitra fa mba nahazo orana 3 andro ny any Beloha, herinandro ny faritr’i Bekily, Tsihombe, ny tapany avaratra amin’Amboasary. Feno rano ireo sihanaka maro (kamory). Fa hatramin’izao dia mbola fafazan’ny tiomena ny faritr’Ambovombe, ny tapany atsimo amin’Amboasary, ary dia mitarika haintany aty Ranopiso, Manambaro, Tolagnaro…
Na ny PAM izay tena manao be tokoa, ny ONG samihafa, ny Fiangonana… dia vonjy taitra ihany.
Nametraka ny C CO K moa ny Fanjakana handrindra, ary koa handalina ny fijerevana ala olana maharitra. Mazava ny ala olana : RANO, ALA, ARY RANO HAMBOLENA. Tsy andaniana andro amin’ny “recensement” (fanisam-bahoaka) izany. Sady ny olona mivezivezy tsy mahapetraka, ao aza ireny nifindra monina ireny. Ny tsy fisian’ny orana tamin’iny taona 2020 iny no anton’izao kere izao fa tsy zavatra hafa. Ary Ambovombe no ihodinkodinan’ny tiomena dia satria ripaka ny ala ka tsy misy misakana ny rivotra avy any an-dranomasina. Ho lasa efitra tahaka an’i Sahara ny faritr’Ambovombe raha tsy malaky voavoly hazo.
Fantatry ny Fitondrana izany, ka enga anie ireny programa nolazaina tamin’ny Filankevitry ny Minisitra ireny mba ho tanteraka : Fitaritana rano avy amin’Ifaho, fanarenana ny fitaritana rano avy amin’ i Mandrare, “desalinisation” any akaikin’i Cap Sainte Marie. Ilay pipeline 120 km nataon’ny Unicef anie ka vakin’ny olona, satria mandalo ny tanànany nefa tsy mba misy “borne fontaine” eo aminy e.
Ary dia hitohy hatrany ny ezaka.